Taariikh : Imisa jeer ayaa la qaday Koobka aduunka ee kubadda cagta ? | Saadaal Media
Taariikh : Imisa jeer ayaa la qaday Koobka aduunka ee kubadda cagta ?
waxaa xiise leh in uu koobka adduunku marar kale ay la soo darseen dhacdooyin haddii dib loo xasuusto maadays u ekaada; waxaa ka mid ahaa xatooyo iyo in la waayo koobkaba lagu tartamayaba.
Dagaalkii labaad ee adduunku waxa uu qarxay sannadkii 1938 kii iyada oo uu Talyaanigu haysto koobka adduunka oo isla sannadkaas dhacay. Waxaa dhacday in aad looga baqay in ciidamadii Naasiga ee Jarmalka, oo si xawli ah u fidayey ay qabsadaan Talyaaniga. Guddoomiyihii xidhiidhka kubadda cagta Talyaaniga ee xilligaas Ottorina Barassi, ayaa si dhuumasho ah ku galay bangi uu khasnaddiisa ku jiray koobkii xulka qaranka Talyaanigu soo qaatay, kaddibna inta uu ka saaray ayaa uu la tegey gurigiisa oo uu ku qariyey sanduuq u hoos yaallay sariirtiisa.
Ottorina Barassi oo ka taxaddaraya in Naasigu ka daba yimaaddo oo uu koobka ka qaado ayaa qariyey warka ah in uu isagu hayo koobkii, waxa aanu sheekadii u ekeysiiyey in koobkii la xaday, sidaasna lagu waayey. 12 sano kaddib oo ahayd markii 1950 kii la ciyaaray ciyaartii koobka kubbadda cagta adduunka ee ugu horreysay dagaalka kaddib, ayaanu koobkii dib u soo saaray.
Sannadkii 1966 kii, ayaa mar labaad la xaday koobkii kubadda cagta adduunka, laakiin markan waxa ay ka dhacday xatooyadu magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Maalmo uu booliisku si adag u raadinayey koobka la xaday kaddib, ayaa ey booliisku lahaa oo lagu magacaabi jiray Pickles uu koobkan dahabka ah ka helay duleedka London, meel qashinqub ah, oo waraaqo wargeyso laga baxay lagu hoos qariyey. Koobka soo helistiisu waxa ay eygii ka dhigtay geesi kaalin kaga jira taariikhda koobka adduunka. Koobkaas oo uu booliisku ku fashilmay in uu ogaado cidda xadday, waxaa tuuggii la ogaaday 52 sano kaddib oo ahayd.
bishii shanaad ee sannadkan 2018 ka, kaddib markii nin lagu magacaabo Gary uu booliiska u sheegay in koobka cidda xadday ay ahayd adeerkii Sidney Cugullere, oo uu kalkaalinayey walaalkiisii yaraa ee Reg, oo isagu aabo u ah ninkan imika sheegay xatooyada. Gary waxa uu ku andacooday in sababta xatooyada ku kalliftay adeerkii iyo aabihiisa caawiyey aanay ahayn tuugo dhaqaale raadis ah, balse farxadda koobkii adduunka ee Ingiriisku helay ay madax martay, kaddibna isaga oo macrad London yaalla lagu soo bandhigayo ay xadeen.
Mar saddexaad ayaa koobka kubadda cagta adduunka la xaday, laakiin markan dib looma helin oo illaa hadda waa baadi maqan. Kaddib waxaa la ikhtiraacay nashqaddii labaad ee koobka kubadda cagta adduunka oo ah kan aynu illaa maanta aragno. Koobka cusub, waxa lagu bilaabay ciyaarihii sannadkii 1974 kii.
Laakiin markan waxaa la beddelay sharcigii hore ee ahaa in koobka adduunku uu ahaado mid keliya oo dahab ah, kaasna ay qaataan hadba xulka qaran ee koobka qaadaa, hayaanna illaa laga gaadhayo ciyaarta dambe oo haddii uu dal kale koobka qaado lagala wareegi jiray.
Inkasta oo koobkan dibadda loo soo saaro oo warbaahinta la tuso, haddana waxaa xeerkiisa laga dhigay in koobka adduunka ee rasmiga ahi uu ahaado mid keliya oo dahabi ah oo ay hayso FIFA, dal kasta oo ciyaaraha kubadda cagta adduunka qaadana la siiyo koob loo ekeysiiyey koobka rasmiga ah, oo aan laga soo celin.
Qore : Cabdirisaaq xasan cabdi (JUBBA )